दाङकी डा. प्रतिभा, जसले चार गोल्ड मेडलसहित एमबिबिएसमा टियू टपिन् (भिडियोसहित) – Rapti Khabar
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमबिबिएस तहको नतिजा गत बुधबार सार्वजनिक भयो । उक्त तहमा यस वर्ष ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजकी छात्रा प्रतिभा सुवेदी विश्वविद्यालय ‘टप’ भइन् । पाँच वर्षे एमबिबिएस तहको ३ हजार ३०० पूर्णाङ्कमा प्रतिभाले २ हजार ५५८ अंक ल्याएकी हुन् ।
प्रतिभाले विश्वविद्यालय प्रथम मात्र होइन, फार्मकोलोजी र कम्युनिटी मेडिसिनमा पनि सर्वाधिक अंकसहित गोल्ड मेडल प्राप्त गरेकी छन् । यस्तै, महिला विधा पनि उत्कृष्ट भइन् । यीसहित उनले एकैपटक चार वटा गोल्ड मेडल प्रारिन् ।
दाङको लक्ष्मीपुर स्थायी घर भएकी प्रतिभा कीर्तिपुरमा बस्दै आएकी छन् । उनले यहीँको राराहिल मेमोरियल स्कूलबाट एसएलसी सकिन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा बबरमहलमा रहेको नेपाल मेगा कलेजमा लिइन् ।
सधैं प्रथम हुने प्रतिभाले चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो करियर अघि बढाउन चाहन्थिन् । त्यसैले एमबिबिएसका लागि प्रवेश परीक्षा दिइन् । जहाँ उनले सरकारी छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकालिन् ।
कुनै पनि विषय अध्ययनका लागि मिहिनेत आवश्यक पर्दछ । किनकि, अध्ययन सजिलो काम होइन । यसमध्ये एमबिबिएस अध्ययनका लागि त झन् निक्कै मिहिनेत गर्नु पर्दछ । प्रतिभा भन्छिन्, ‘स्कुल र प्लस टुमा भन्दा धेरै नै मिहिनत गरियो ।’
यही मिहिनेतले उनलाई चार चार वटा गोल्ड मेडल दिलायो । तर, प्रतिभा गोल्ड मेडललाई मात्र आफ्नो सफलताको मापक ठान्दिनन् । ‘गोल्ड मेडलभन्दा पनि हाम्रो अध्ययन बिरामीसँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो सानो लापरवाहीले कसैको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब झन् बढी मिहिनेतको खाँचो छ ।’ यस क्षेत्र राम्रो अंक ल्याउने गरी गरिने क्षणिकभन्दा निरन्तर मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले अहिले आफैंले पाएको उत्कृष्टताको ताज जोगाइराख्न चुनौती भएको उनको बुझाइ छ ।
गोल्ड मेडालिष्ट प्रतिभा आफू अन्य विद्यार्थीभन्दा भिन्न ठान्दिनन् । अध्ययनका बेला महत्त्वपूर्ण बुँदामा अन्डरलाइन गर्छिन् । जुन उनको विद्यालयदेखिकै बानी हो । यस्तै, परीक्षामा प्रश्नले जे खोजेको हो, त्यही लेख्ने गरेको उनले बताइन् ।
कुनै पनि विद्यार्थीले जति नै मिहिनेत गर्ने भए पनि सही बाटो देखाउन अभिभावक, शिक्षक र शैक्षिक संस्था महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिभा बताउँछिन् । त्यसैले उनी आफ्नो सफलताको श्रेय अभिभावक, शिक्षक÷शिक्षिका, साथीभाइलाई दिन्छिन् ।
किस्ट मेडिकल कलेजमा डरमोटोलोजी विभागमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम गर्दै गरेकी उनको केही समय दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने योजना छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाहिर गए पनि उनी एक पटक दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने बताउँछिन् ।
चिकित्सा क्षेत्रमा भविष्य बनाउँदै गरेकी प्रतिभा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सानो स्वास्थ्य चौकी, आवश्यक पूर्वाधार नभएको ठाउँमा गएर जानु डाक्टरका लागि निक्कै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड र सिता दाहालको बिबाह जनबादी संस्कार कि ? बुर्जुवा संस्कार ?
२६ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको सुनाकोठीमा विहीबार भव्य समारोहवीच पञ्चैबाजाको धूनमा विवाहको ५० औं वर्षगाँठ मनाए । प्रचण्ड दम्पतीले हरियो दूबोको माला लगाएको र छेऊमा पञ्चैबाजा घन्किएको सुन्दा परम्परागत विवाहकै झल्को आउँथ्यो । प्रचण्ड दम्पत्तिको यो ५० औं वर्षगाँठ विशुद्ध पारिवारिक कार्यक्रम मात्रै हो कि सार्वजनिक चासोको कार्यक्रम हो ? […]
अब डिजिटल दक्षिणा: बैंकहरुका अफरै अफर, ल्याए आकर्षक योजना
८ कात्तिक, काठमाडौं । दसैँंमा पैसाको डिजिटल कारोबार बढाउने विषय हरेक वर्षजसो उठ्ने गर्छ । तर सामान खरिददेखि दक्षिणा दिँदासम्म दसैँको समयमा नोटकै प्रयोग बढी हुने गर्छ । नोटको सुरक्षाका लागि पनि दसैँमा डिजिटल दक्षिणा दिनु पर्छ भन्ने वहस विगतका वर्षहरुमा हुँदै आए पनि शुरुवात भने भएको थिएन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यस […]
काठमाडौं, मंसिर १४ बागलुङ गलकोट हटियाबाट यात्रु बोकेर काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदै गरेको कैलाश एअरको हेलिकप्टरमा चरा ठोक्किएको छ। आइतबार दिउँसो १:४० मा हेलिकप्टरमा चिल ठोक्किएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। ‘हामी करिब दुई हजार मिटर उचाइमा उडिरहेका थियौं। एक्कासी चिल देखा पर्‍यो,’ हेलिकप्टरमा रहेका यात्रु, गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले […]